Yaa ku dagaallamaya gobolka ku yaal woqooyiga Addis Ababa? | Biyoguurenews.com
Home Wararka Yaa ku dagaallamaya gobolka ku yaal woqooyiga Addis Ababa?
Madaxa hay’adda cabashooyinka shacabka ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in tirada dadka lagu dilay rabshadihii dhawaan dhexmaray labada qowmiyadood ee ugu tirada badan dalkaasi ay suurtagal tahay in ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa 200 oo qof.
Warar hore ayaa sheegayay in ilaa 50 qof ay ku dhinteen dagaal u dhexeeya Amxaarada iyo Oromada, kuwaa oo ku dagaalamay waqooyiga gobolka Amxaarada.
Endale Xayle oo ah madaxa hay’adda cabashooyinka shacabka ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in ku dhawaad 330,000 oo qof ay ku barakaceen colaaddaasi.
Waxa uu sidoo kale sheegay in afar meelood hal meel la gubay guryaha magaalada Ataye.Sida ku cad macluumaadka aan ka helnay dadka la barakiciyay, waxaan ku qiyaaseynaa in ilaa 200 oo qof ay ku dhinteen labada aag, balse wali waxaan u baahannahay in aan xaqiijino tirade dhabta ahi,” ayuu yiri Endale Haile oo la hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters.
Rabshadahan ayaa inta badan ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Amxaarada balse dad ahaan waxaa ku badan qowmiyadda Oromada, waxaana horraantii usbuucan ay dowladda Itoobiya gelisay qeybo ka mid ah gobolkaasi xaalad deg deg ah.
Rabshado xooggan ayaa ka jiray qaybo badan oo ka mid ah dalka Itoobiya, waxaana ka mid ah gobolka waqooyiga ee Tigray oo dagaalo ay ka socdeen lixdii bilood ee la soo dhaafay.
Doorashooyinka qaranka ee dalkaasi Itoobiya ayaa lagu wadaa in ay dhacaan bisha Juun ee sanadkan, iyadoo dhowr gobol oo ka tirsan dalkaasi ay haatan ka jiraan rabshado siyaasadeed iyo kuwa u dhaxeeya qowmiyadaha kala geddisan ee dalkaasi.
Ra’iisalwasaare Abiy Axmed ayaa isbadal siyaasadeed ka sameeyay dalkaasi kaddib ku dhowaad 30 sano oo uu dalkaasi ka jiray xukun adag balse hadda waxaa soo baxay quwado ku saleysan gobollo iyo qowmiyado oo loolan adag kula jira xisbiga Abiy si ay u helaan dhaqaale iyo awood dheeri ah.
Horey waxaa u jiray walaac laga muujiyay tacaddiyo la sheegay in laga geystay gobolka Tigreeda, kuwaa oo lala xiriirinayo ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea ee gacanta ku siinayay ciidamada milatariga Itoobiya dagaalka ka dhanka ah maamulkii Tigreeda ee TPLF ee xukunka laga tuuray.
Midowga Yurub ayaa sheegay in ay heleen warbixino is daba joog ah oo ku saleysan dilka iyo beegsiga qoomiyad, lagana yaabo inuu gobalka
waqooyiga Itooboiya ku yaalla ee Tigray ay ka dhaceen dambiyo dagaal.
Previous articleEthiopia oo safiir cusub usoo magacowday Soomaaliya
Next articleWarbaahinta Taiwan Oo War-bixin Dheer Ka Qortay Xidhiidhka Somaliland, Dekedda Berbera & Doorka Dalalka Carabta Ee Qaniga Ah